Gudigii Abaalmarinta Nobel piceka Siiyay abiya Axmed oo Digniin UDiray abiya - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Gudigii Abaalmarinta Nobel piceka Siiyay abiya Axmed oo Digniin UDiray abiya
Gudigii Abaalmarinta Nobel piceka Siiyay abiya Axmed oo Digniin UDiray abiya
billada Nobel-ka ee Norway ayaa ku biiray codadka caalamiga ah ee ugu baaqay ra’iisul wasaaraha Itoobiya inuu soo afjaro dagaalka sokeeye ee 14-ka bilood ka socday dalkaas kaasoo galaaftay nolosha kumanaan qof.
Qoraal ay soo saareen ayaa lagu sheegay in Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel 2019 – ay mas’uuliyad gaar ah ka saaran tahay sidii loo soo afjari lahaa dhiigga daadanaya.
Afhayeenka Abiy Ahmed Billen Seyoum ayaa horay u sheegay in abaalmarinta nabadda ee Nobel aysan ahayn xakame qabanaya marka dalka la soo weeraro
Hal sano ka dib markii uu ku helay abaal-marintan soo afjaridda dagaalkaa dheeraa ee dalkiisa kala dhexeeyey Eritrea, Mr Abiy waxa uu diray ciidamo la dagaalama falaagada waqooyiga gobolka Tigray.
Dagaalkaas ayaa malaayiin qof ku qasbay inay guryahooda ka baxaan. Dowladda ayaa lagu eedeeyaa inay hor istaagtay gargaarka bini aadamtinimada.
Previous articleFaroole oo eedeeyey Raysulwasaarihii Hore ee Soomaaliya cumar Cabdirashiid
Next articleCumar cabdirashiid oo markale ka hadlay Xaalka cakiran ee Boosaaso